Tababbar ku saabsan dastuurka oo Muqdisho lagu soo gabo gabeeyay “SAWIRRO” | Baydhabo Online
8 Kenyan police killed by bomb blast near Somalia...
Tababbar ku saabsan dastuurka oo Muqdisho lagu soo gabo gabeeyay “SAWIRRO”
Tabanbarkani oo soconayay saddex maalin ayaa maanta loo soo gabangabeeyay qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Dastuurka iyo Gudiyada qaabilsan arrimaha Dastuurka, waxaana intii uu soconayay la siinayay casharo ku saabsan qaababka loo sameeyo dastuur iyo siyaabaha loo maro.
Justin Duoa agaasimaha hay’adda EASA oo maalgalineysay tababbarkaan ayaa sheegay in Wasaaradda ay ka taageeraan wacyi gelinta bulshada iyo arrimaha dastuurka.
“Waxaan wasaaradda kala shaqeyneynaa arrimaha wacyi gelinta iyo dastuurka, waana sii wadi doonaa arrimahaas aan kala shaqeyno waaana hubaa in ay faa’iido u tahay bulshada Soomaaliyeed”ayuu yiri Jastin.
Agaasimaha wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Zubayr ayaa kula dar daarmay shaqaalihii tababbarkaan ka qayb qaatay in ay ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda dastuurka Xuseen Maxamed Sheekh Xuseen ayaa sheegay in dhammaan gobolada dalka lagu qaban doono kulamo wada tashi ah oo ku saabsan Dastuurka, si bulshada Soomaaliyeed ay talo ugu yeeshaan.
“Waxaan dhamaan gobolda dalka aan ku qaban doonaa kulamo looga tashanayo dastuurka, waxaana ka qayb gelin doonaa bulshada Soomaaliyeed, si ay aragtidooda uga dhiibtaan”ayuu yiri Wasiirka Dastuurka.